Ski, masoandro sy solom-panatanjahantena ho an'ny Freerider
TSARA TSARA ANAO, TSIM-PANAZAVANA ISIKA
Uller® dia marika optikaly fanatanjahantena noforonin'ireo sy ho an'ireo tia fanatanjahantena ambony indrindra. Endri-javatra ara-teknika avo lenta hiantohana ny fampisehoana tsara indrindra sy ny fahatokisana farany amin'ny fepetra manara-penitra mandritra ny fampiharana fanatanjahantena matihanina.
Ny goggame amin'ny ski sy ny snowboard dia noforonina sy ho an'ny mpandeha lavitra. Toetra teknika avo lenta mba hiantohana ny fampisehoana tsara indrindra sy ny fahatokisana azy indrindra amin'ny fepetra faran'izay henjana mandritra ny fanaon'i Freeride.
JEREO NY MASO REHETRA
Frame vita amin'ny cellulose acetates tsara indrindra. Nosafidianay tsara ny andiany rehetra mba hametrahana fa ny vokatra no ho tsara indrindra. Ny zorony tsirairay dia namboarina ary narafitra feno an'ireo mpanao asa tanana
JEREO NY TSARA REHETRA
Solom-panatanjahantena amin'ny fihazakazana, ny bisikileta, ny ski ary ny fanaovana fanatanjahan-tena hafa. ny azo fehezina ny lente ary misy ny 2 samihafa: iray ho andro mafana ary ny iray andro manjo ny faharatsiana.
Ny Uller® Caps dia noforonina sy ho an'ireo tia fanatanjahantena. Miaraka amin'ny endrika mazava sy voafaritra dia mahita vokatra iray mifanaraka tsara amin'ny fitakian'ny atleta rehetra isika.
JEREO NY CAPS REHETRA
Ilaina ny mitondra saron-tava tsara rehefa manao fanatanjahan-tena tafahoatra amin'ny lanezy. Mahatsapa ve ianao fa vonona handresy ireo loza ateraky ny natiora rehefa manao ski? Jereo ireo fotoana 5 tena manandanja indrindra izay tsy isalasalana fa hankasitrahanao ny maka ny tsara indrindra aminao solomaso lanezy!
Hetsika sy fifaninanana ara-panatanjahantena mahery indrindra 10
Jereo ny fifaninanana sy ny hetsika ara-panatanjahantena tena tsara indrindra any Eropa sy izao tontolo izao! Betsaka ny fisian'ireo mpitsangatsangana maro eto amin'izao tontolo izao, miainga amin'ny hafahafa sy tena niavaka, hatrany amin'ny mahazatra indrindra, ny angano ary ny "mahazatra". Vakio ary fantaro ny momba ny fifaninanana 10 faran'izay henjana indrindra eto an-tany.
Jereo ny traikefa amin'ny fanaovana ski amin'ny tendrombohitra Colorado!
Travel sy ny toerana
Atsofohy midina ny tehezan'i Colorado sy ny smahazoa ny rivotra madio rehefa manao ski ny fanampiana mahavariana dia tsy manam-paharoa. Te hahafantatra bebe kokoa momba ny traikefa ski any Colorado? Vakio hatrany ary fantaro ny haavon'ny adrenaline omena ity toerana tsy mampino ity!
mandray solomaso ski Tena ilaina izany rehefa mampihatra an'ity fanatanjahantena ity amin'ny endriny rehetra isika. efa fantatrao ve izy ireo? Las fomba fanao ski? Tohizo ny famakiana mba hahitana ny fomba maodely tsara indrindra ahafahanao manao ski ary mamantatra ny antony tokony hampiasanao tsara foana solomaso ski fiarovana!
ULLER® FAMPISORONANA NY FIVORIANA MAHAY ULLER®
Uller® dia marika haingam-pandeha avo lenta noforonin'ireo sy atleta elita. Ny vokatrao rehetra dia noforonina ambanin'ny traikefa ananan'ireo atleta haingam-pandeha ambony izay manala ny filàny ao amin'ny vokatra ary natsangana hamenoana ny fangatahana rehetra. Ny vokatra dia nosedraina hitondra azy ireo amin'ny ambaratonga farany amin'ny fihenjanana indrindra mba hahazoana antoka fa hahatratra ny fanantenana izy ireo mandritra ny fanatanjahantena amin'ny fanatanjahantena matihanina.